Dowladda Somaaliya oo gacanta ku dhigtay qalabki Idaacada Afka Alshabaab (dhegayso) – Radio Daljir
Febraayo 20, 2018 3:00 g 0
Wasaaradda Warfaafinta dowladda ayaa sheegtay inay la soo wareegtay qalabkii Idaacada Andalus ee Al Shabaab ugu tiilay degaanka Mubaarak ee Gobolka Shabellaha hoose.
C/raxmaan Iidaan Yoonis oo ah Siihayaha Wasiirka Warfaafinta Somaliya, ahna Wasiir ku xigeenka Wasaaradaasi ayaa warbaahinta u sheegay in qalabka Idaacaasi lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in hadda ay si buuxda ula wareegeen, islamarkaana ay hadda gacanta ku hayaan.
Abaanduulaha Ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Cali Canood ayaa sheegay in maalmo ka hor ay Burburiyeen Idaacadda Anduluus Laanteeda degaanka Mubaarak.
Shirkadda Towfiiq oo Macaamisheeda Abaalmarino gudoonsiisay (dhegayso_sawiro)